चालु आर्थिक वर्षमा नेपाल हाइड्रो डेभलपरले गर्यो नाफा
माघ १९, काठमाडौं । नेपाल हाइड्रो डेभलपर कम्पनीले चालू आवको दोस्रो त्रैमासमा रू २ करोड २२ लाख नाफा कमाएको छ । कम्पनीेले पहिलो त्रैमासमा रू १ करोड २३ लाख नाफा कमाएको थियो । अघिल्लो आवको तुलनामा नाफा न्यून प्रतिशतले बढी हो ।
कम्पनीको पूँजी रू.२६ करोड रहेको छ । कम्पनीले विद्युत विक्री गरेर रू. ६ करोड ७७ लाख कमाएको छ भने रिजर्भ कोषमा रू. १ करोड ३६ लाख छुट्याएको छ । कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी रू. ८ दशमलव ५६, मूल्य आम्दानी अनुपात २५ दशमलव ९४ र प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. १ सय ५ दशमलव २६ रहेको छ ।